သဘာဝနညျးဖွငျ့မကျြနှာအမညျးစကျဖယျခွငျး | OnDoctor
By Wai Yan Lin	 On May 22, 2018 Last updated Jun 20, 2018
မျက်နှာပေါ်ရှိ အမည်းစက်များကို သဘာဝနည်းဖြင့် ကုသချင်ပါသလား? မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်များရှိခြင်းက မိမိအလှအပအတွက် ယုံကြည်မှု နည်းစေပါတယ်။ အလှပြင်ပစ္စည်းမျိုးစုံ သုံးသော်လည်း ဓာတုဗေဒ ပါဝင်မှုကြောင့် စိုးရိမ်ကြောင်ကြမှု ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘာလို့ အမည်းစက် ဖြစ်စေသလဲ?
သင့်အရေပြားရှိ Melanocytes လို့ခေါ်တဲ့ ဆဲလ်မှ melatonin လို့ခေါ်တဲ့ အရောင်ဖြစ်စေတဲ့အရာကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အရေပြားပျက်ဆီးမှုကြောင့် melatonin အများကြီးထုတ်လျှင် အရေပြားအမည်းစက်တွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ပျက်ဆီးစေသော အကြောင်းများမှာ
-မျိုးရိုးဗီဇ စသည်တို့ကြောင့် ပျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။
အာလူးကို ရေဆေးပါ။ ထက်ခြမ်းခွဲပါ။ ခွဲခြမ်းဘက်သို့ ရေတစက်နှစ်စက် ထည့်ပါ။ အာလူးအခြမ်းကို အမည်းစက်နေရာသို့ စက်ဝိုင်းကဲ့သို့ ပွတ်ပေးပါ။ ၁၀မိနစ်ခန့် ထားပါ။ ရေဆေးချပါ။အာလူးသည် melatonin အလွန်အကြူး ထုတ်မှုလျော့စေသော အင်ဇိုင်းပါသောကြောင့် အမည်းစက်များ အစက်အပျောက်များကို တရက် ၃ ကြိမ် တလခန့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
လိမ္မော်သီး အရည်ညှစ်ကာ ပျားရည်နှင့်ရော၍ အမည်းစက်နေရာကို သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ၁၅မိနစ်ခန့် အကြာရေဆေးချပါ။ လိမ္မော်သီးတွင် သဘာဝအရောင်ချွတ် သတ္တိရှိပြီး ပျားရည်သည် အစိုဓာတ် ပေးပါသည်။ လိမ္မော်သီးတွင် ပါဝင်သော vit c သည် နေလောင်မှုကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် တရက်၂ ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးလျှင် အသားအရေ မဲညစ်မှု သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
လိမ္မော်ရည်တဇွန်းနှင့် ဆနွင်းမှုန့် ရောလိမ်းပါ။ ၁၅မိနစ်ကြာ ရေဆေးချပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်ပြုလုပ်ပေးပါက အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပ စေပါလိမ့်မယ်။
ပန်းသီး ရှလကာရည်ကို ရေနဲ့ဆတူရော၍ အမည်းစက်နေရာကို သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ၅မိနစ် အကြာ ရေဆေးချပါ။ ပန်းသီးရှလကာရည်သည် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်စေပါတယ်။ တနေ့၂ ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။
ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပါ။ အမည်းစက်နေရာသို့ ကြက်သွန်နီကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ၁၀မိနစ်ခန့်အကြာ ရေဆေးချပါ။ ကြက်သွန်နီတွင် ပါဝင်သော vit c သည် အမည်းစက်များ ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။ တနေ့၂ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ။
ရှားစောင်းလက်ပတ် ၂ဇွန်း နှင့် ပျားရည် ဇွန်းတဝက် ရောလိမ်းပါ။ မိနစ်၂၀အကြာ ရေဆေးချပါ။ တပတ်လျှင် ၂ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်သည် အသားအရေ အစိုဓာတ်ကိုထိန်းပြီး နေလောင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သခွားသီးရေတဇွန်း၊ ပျားရည်တဇွန်းနှင့် လိမ္မော်တဇွန်း ရောလိမ်းပါ။ ၁၀မိနစ် အကြာ ရေဆေးချပါ။ သခွားသီးသည် အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး အရေးအကြောင်း အမည်းစက် ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
လိမ္မော်အခွံ အခြောက်လှမ်းအမှုန့် လုပ်ပါ။ အမှုန့်ကို လိမ္မော်ရည်တဇွန်း၊ နို့တဇွန်း၊ ပျားရည်တဇွန်းရော၍ အမည်းစက်ရှိတဲ့ နေရာလိမ်းပါ။ မိနစ် ၂၀ အကြာ ရေဆေးချပါ။ အမည်းစက်တွေသိသာစွာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ တပတ် ၃ -၄ကြိမ် လုပ်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးအရည်၊ ကွေကာအုပ် ၂ဇွန်း နှင့် ဒိန်ချဉ် ဇွန်းတဝက်ကို ရောလိမ်းပါ။ မိနစ်၂၀ အကြာ ရေဆေးချပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးသည် သဘာဝ အစွန်းချွတ်စေပြီး ဒိန်ချဉ်သည် အသားအရေတင်းရင်းစေပါတယ်။ ကွေကာအုပ်သည် ချေးချွတ်စေပြီး ငယ်ရွယ်စေပါတယ်။
ထောပတ်သီးအမှည့်ချေပြီး မျက်နှာပေါ်သို့ လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၃၀အကြာ ရေဆေးချပါ။ထောပတ်သီးတွင် ပါဝင်သော vit c နဲ့oleic acid သည် အသားအရေ တင်းရင်းစေပြီး အာဟာရဓာတ် ရရှိစေပါတယ်။
ဌက်ပျောသီးချေပြီး ပျားရည်ဇွန်း ၄ပုံ ၁ပုံနှင့် နို့တဇွန်း ရောလိမ်းပြီး မိနစ်၃၀အကြာ ရေဆေးချပါ။ တပတ်၂ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပေးပါက ဌက်ပျောသီးသည် ချေးချွတ်ပြီး Vit k သည် အရေပြားအတွက် အာဟာရဓာတ် ရရှိစေပါတယ်။
မကျြနှာပျေါရှိ အမညျးစကျမြားကို သဘာဝနညျးဖွငျ့ ကုသခငျြပါသလား? မကျြနှာပျေါက အမညျးစကျမြားရှိခွငျးက မိမိအလှအပအတှကျ ယုံကွညျမှု နညျးစပေါတယျ။ အလှပွငျပစ်စညျးမြိုးစုံ သုံးသျောလညျး ဓာတုဗဒေ ပါဝငျမှုကွောငျ့ စိုးရိမျကွောငျကွမှု ဖွဈစပေါတယျ။
ဘာလို့ အမညျးစကျ ဖွဈစသေလဲ?
သငျ့အရပွေားရှိ Melanocytes လို့ချေါတဲ့ ဆဲလျမှ melatonin လို့ချေါတဲ့ အရောငျဖွဈစတေဲ့အရာကို ထုတျပေးပါတယျ။ အရပွေားပကျြဆီးမှုကွောငျ့ melatonin အမြားကွီးထုတျလြှငျ အရပွေားအမညျးစကျတှေ ဖွဈစပေါတယျ။ ပကျြဆီးစသေော အကွောငျးမြားမှာ
-မြိုးရိုးဗီဇ စသညျတို့ကွောငျ့ ပကျြဆီးတတျပါတယျ။
အာလူးကို ရဆေေးပါ။ ထကျခွမျးခှဲပါ။ ခှဲခွမျးဘကျသို့ ရတေစကျနှဈစကျ ထညျ့ပါ။ အာလူးအခွမျးကို အမညျးစကျနရောသို့ စကျဝိုငျးကဲ့သို့ ပှတျပေးပါ။ ၁၀မိနဈခနျ့ ထားပါ။ ရဆေေးခပြါ။အာလူးသညျ melatonin အလှနျအကွူး ထုတျမှုလြော့စသေော အငျဇိုငျးပါသောကွောငျ့ အမညျးစကျမြား အစကျအပြောကျမြားကို တရကျ ၃ ကွိမျ တလခနျ့ ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
လိမ်မျောသီး အရညျညှဈကာ ပြားရညျနှငျ့ရော၍ အမညျးစကျနရောကို သုတျလိမျးပေးပါ။ ၁၅မိနဈခနျ့ အကွာရဆေေးခပြါ။ လိမ်မျောသီးတှငျ သဘာဝအရောငျခြှတျ သတ်တိရှိပွီး ပြားရညျသညျ အစိုဓာတျ ပေးပါသညျ။ လိမ်မျောသီးတှငျ ပါဝငျသော vit c သညျ နလေောငျမှုကို ကာကှယျပေးသောကွောငျ့ တရကျ၂ ကွိမျ ပွုလုပျပေးလြှငျ အသားအရေ မဲညဈမှု သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
လိမ်မျောရညျတဇှနျးနှငျ့ ဆနှငျးမှုနျ့ ရောလိမျးပါ။ ၁၅မိနဈကွာ ရဆေေးခပြါ။ အိပျရာမဝငျခငျပွုလုပျပေးပါက အသားအရေ ကွညျလငျတောကျပ စပေါလိမျ့မယျ။
ပနျးသီး ရှလကာရညျကို ရနေဲ့ဆတူရော၍ အမညျးစကျနရောကို သုတျလိမျးပေးပါ။ ၅မိနဈ အကွာ ရဆေေးခပြါ။ ပနျးသီးရှလကာရညျသညျ အသားအရကေို သဘာဝအတိုငျး ဖွဈစပေါတယျ။ တနေ့၂ ကွိမျ လုပျပေးပါ။
ကွကျသှနျနီကို ပါးပါးလှီးပါ။ အမညျးစကျနရောသို့ ကွကျသှနျနီကို ပှတျတိုကျပေးပါ။ ၁၀မိနဈခနျ့အကွာ ရဆေေးခပြါ။ ကွကျသှနျနီတှငျ ပါဝငျသော vit c သညျ အမညျးစကျမြား ဖယျရှားပေးပါလိမျ့မယျ။ တနေ့၂ကွိမျ ပွုလုပျပေးပါ။
ရှားစောငျးလကျပတျ ၂ဇှနျး နှငျ့ ပြားရညျ ဇှနျးတဝကျ ရောလိမျးပါ။ မိနဈ၂၀အကွာ ရဆေေးခပြါ။ တပတျလြှငျ ၂ကွိမျ ပွုလုပျပေးပါ။ ရှားစောငျးလကျပတျသညျ အသားအရေ အစိုဓာတျကိုထိနျးပွီး နလေောငျမှုကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
သခှားသီးရတေဇှနျး၊ ပြားရညျတဇှနျးနှငျ့ လိမ်မျောတဇှနျး ရောလိမျးပါ။ ၁၀မိနဈ အကွာ ရဆေေးခပြါ။ သခှားသီးသညျ အသားအရအေတှကျ ကောငျးမှနျပွီး အရေးအကွောငျး အမညျးစကျ ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
လိမ်မျောအခှံ အခွောကျလှမျးအမှုနျ့ လုပျပါ။ အမှုနျ့ကို လိမ်မျောရညျတဇှနျး၊ နို့တဇှနျး၊ ပြားရညျတဇှနျးရော၍ အမညျးစကျရှိတဲ့ နရောလိမျးပါ။ မိနဈ ၂၀ အကွာ ရဆေေးခပြါ။ အမညျးစကျတှသေိသာစှာ ပြောကျကငျးစပေါတယျ။ တပတျ ၃ -၄ကွိမျ လုပျပါ။
ခရမျးခဉျြသီးအရညျ၊ ကှကောအုပျ ၂ဇှနျး နှငျ့ ဒိနျခဉျြ ဇှနျးတဝကျကို ရောလိမျးပါ။ မိနဈ၂၀ အကွာ ရဆေေးခပြါ။ ခရမျးခဉျြသီးသညျ သဘာဝ အစှနျးခြှတျစပွေီး ဒိနျခဉျြသညျ အသားအရတေငျးရငျးစပေါတယျ။ ကှကောအုပျသညျ ခြေးခြှတျစပွေီး ငယျရှယျစပေါတယျ။
ထောပတျသီးအမှညျ့ခပြွေီး မကျြနှာပျေါသို့ လိမျးပေးပါ။ မိနဈ ၃၀အကွာ ရဆေေးခပြါ။ထောပတျသီးတှငျ ပါဝငျသော vit c နဲ့oleic acid သညျ အသားအရေ တငျးရငျးစပွေီး အာဟာရဓာတျ ရရှိစပေါတယျ။
ဌကျပြောသီးခပြွေီး ပြားရညျဇှနျး ၄ပုံ ၁ပုံနှငျ့ နို့တဇှနျး ရောလိမျးပွီး မိနဈ၃၀အကွာ ရဆေေးခပြါ။ တပတျ၂ကွိမျခနျ့ ပွုလုပျပေးပါက ဌကျပြောသီးသညျ ခြေးခြှတျပွီး Vit k သညျ အရပွေားအတှကျ အာဟာရဓာတျ ရရှိစပေါတယျ။
ဟိုကွား ဒီကွား ပေါငျကွားအမဲကှကျမြား